Bakaaro iyo howl gal dad lagu xirxiray | KEYDMEDIA ONLINE
Bakaaro iyo howl gal dad lagu xirxiray
Muqdisho(Keydmedia) Iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay dagaalo xoogan ka socdeen Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana uu gaabis ku socday ganacsiga suuqa bakaaraha ayaa hadana waxaa soo baxaya warar sheegaya in suuqaasi dad laga qabqabtay.
Dadka la xirixiray ayaa tiradooda waxa ay gaareysaa ilaa 9 ruux iyadoona laga kale qabtay qeyba kale duwan oo ka tirsan Suuqa Bakaaraha sida suuqa daawada, Bacadlaha, Wadada Shirkadaha iyo meela kale oo badan.
Dadka la xiray ayaa waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Carabey oo xarun bukaan socod eegta ah ku lahaa suuqa dawada kaasoo laba maalin ka hor ay sidoo kale kaxeesteen ciidamada ka taliya Bakaaraha wiil la shaqeynayay.
Waxaa kaloo wararku ay sheegayaan in dadka la kaxeestay uu ku jiray nin oday ah oo wiilkiisa uu ka mid yahay kooxaha Dowlada ka soo horjeeda misna ku canaantay inuu isaga hora kooxahaasi kaasoo inta si garba duub ah loo xiray laga kaxeeyay bartamaha suuqa Bakaaraha.
Ka sokow madaafiicda joogtada ka noqotay suuqa Bakaaraha ayaa hadana ganacsatada waxaa u wehliya arinkan walaaca ay ka qabaan xariga ay kala kulmayaan kooxahaasi suuqa ka taliya.